ပါ ၀ င်သူများ၏ပါဝင်မှုရလဒ်များ - ဒန်အွန်သည်သူ၏ SEO စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ၇ ပုံသို့ထောက်ခံချက်များဖြင့်မည်သို့ဆွဲဆောင်ခဲ့သနည်း Martech Zone
ပါဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စျေးကွက်တွင်အလွန်အသုံးများပြီး၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆန်းစစ်ထားသော KPI ၏စကားလုံးများပါ ၀ င်သောကုန်ကြမ်းစကားလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယုတ္တိနိဂုံးချုပ်သွားသည်။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်စိတ် ၀ င်စားစရာမရှိသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ကြသည်။ ဆက် သို့မဟုတ်သူတို့၏ website ကိုစောင့်ရှောက်ရန် လတ်ဆတ်သော.
ပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာဟာအဆုံးသတ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Google သည်အကြောင်းအရာပိုမိုများပြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်ဘလော့ဂါများ၊ တွဲဖက်များနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်သာမန်အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာပျံ့နှံ့မှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ အနာဂတ်ဂူဂဲလ်သို့ပြန်လာမည်၊ အသွားအလာကိုမျှော်လင့်နေသည်။
အခုတော့ algorithm ကို၏မြင့်တက်ခြင်းဖြင့်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမျက်နှာသာပေး အသုံးပြုသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြောင့်အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုခံရသည့် SERP များ CTR (နှုန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ)၊ Bounce Rate (တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုချက်ချင်းစွန့်ခွာလျှင်) နှင့်နေထိုင်မှုအချိန် (ပျမ်းမျှအားဖြင့် site / page) စသည့်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအပြောင်းအလဲသည်အကြောင်းအရာများပိုမိုများပြားသောအကြောင်းအရာများရှိသည့်လယ်ယာမြေများနှင့်ဖုတ်ကောင်ဘလော့ဂါများအကြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ယာဉ်တိုက်မှုပြwနာများကိုဖြေရှင်းရန်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်၊ စိတ္တဇနှင့်အခညျြးနှီး၏။
မနစ်မြုပ်နိုင်သောဇာတ်လမ်းကိုပြောပြပါ - ပြောင်းလဲမှုအတွက်အကြောင်းအရာ
မီးပုံတစ်ပုံတည်းတွင်ပင်အဘိုးသည်သူ၏အချိန်နှင့်ပေးပို့မှုသည်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်ထိုအရာကိုပြောပြနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သည်ပရိသတ်ကိုအာရုံစိုက်စေပြီး၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုက်ရိုက်ပြောဆိုသည်။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသော်လည်းအသုံးမ ၀ င်သောနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ နားထောင်သူအတွက်ဘာပါလဲ အခြေခံစာမူဟောင်းသို့မဟုတ်စာဟောင်းအဟောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာအပိုင်းအစတစ်ခုသည်စာရင်းကိုင်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှည်လျားသောစွန့်စားမှုများသည်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့၊
သတင်းအချက်အလက်၊ သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြစ်ပညာရေးသည်မှားယွင်းသောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ငါတို့နှင့်အတူ, သတင်းအချက်အလက် Over ၌ရှိကြ၏ အိုင်ပက်ဒ်များဖြင့်ပြည့်နေသည့်မိုင် ၃၃၉ မိုင်ရှိသည့်တိုင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကွန်ယက်ကိုပင်မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါနှင့်အချက်အလက်ပမာဏသည်နှစ်စဉ်တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ အများပြည်သူအားပညာပေးရန်သို့မဟုတ်သတင်းပို့ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ခေတ်မမီတော့သောနည်းပရိယာယ်များသည်အဘယ်ကြောင့် content content များသတ်သေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်များကပြသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်မှုက အလားအလာရဲ့နာကျင်မှု နှင့်သင်သူသို့မဟုတ်သူမ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသူတို့၏ပြmitနာကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဘယ်တော့လဲ Dan Anton သူအွန်လိုင်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသူစတင်ခဲ့သည် Mandino ဩဃလူတစ် ဦး ၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုတိုးမြှင့်ရမည်။ အခြားသူများကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ထက် ပို၍ ကောင်းသောနည်းလမ်းကဘာလဲ။ တွဲဖက်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်များအဖြစ်လူသိများ, ဒီဖောက်သည်သင်သည်သူတို့၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနှင့်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်သစ္စာစောင့်သိ။ စင်စစ်အားဖြင့်အများစုသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ခြင်းအတွက်ငွေကြေးအရလျော်ကြေးရလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် JVzoo, Clickbank, Amazon နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများသည်အရည်အသွေးကောင်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသူများအားဘဏ္incentာရေးဆိုင်ရာမက်လုံးပေးရန်ဖြစ်သည်။
သင့်ထုတ်ကုန်ကိုအခြားသူများအားမြှင့်တင်ရန်အတွက် (က) အလုပ်လုပ်ရန် (ခ) ရောင်းအားကိုထောက်ပံ့ရန်အမြတ်အစွန်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် SaaS (software အနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆော့ဝဲလ်) ထုတ်ကုန်များကသူတို့၏ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ အခုတော့ဒန်နှင့်သူ၏အဖွဲ့၏မူလဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအစား၊ အမှတ်တံဆိပ်ပြောဆိုခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုရာနှင့်ချီသောအခြားသူများစာသားအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒန်သည်အွန်လိုင်းအသွားအလာမျိုးဆက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဘလော့ဂ်ပို့စ် ၁၀၀၀၀ ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်ခိုင်မာသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်ယုံကြည်ရသောထိပ်တန်းအင်တာနက်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းမှအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ ၀ ယ်သူများထံမှမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရောင်းအားနှင့်မလုံလောက်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် Google တွင် BacklinksIndexer ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်ရလဒ် ၁၅,၃၀၀ ကျော်နှင့် Crowd Search Me Review အတွက် ၄,၅၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ မူလဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုသည်အခြားသူများအားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး WarriorForum, BlackhatWorld နှင့် Terry Kyle နှင့် Jon Leger ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောဖိုရမ်များအပေါ်ထောက်ခံစာများထွက်ပေါ်လာသည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုနှင့်မျက်နှာပြင်ပုံဥပမာ -
အဘယ်သူမျှမဟောင်း, ပျင်းစရာသို့မဟုတ်အသုံးမကျအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းတစ်ခုခုဆွေးနွေးရန်လိုသည်။ လူတွေက ဆုရရှိသူမှဆွဲဆောင် နှင့်ကးအနိုင်ရ။ ဒန်၏ထုတ်ကုန်ကိုပျှမ်းမျှအင်တာနက်ထုတ်ကုန်မှပြောင်းလဲခြင်း၏ပထမအဆင့်မှာ ၀ ယ်ယူသူများ၏ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုပုံစံ၊ သို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိသည့်သက်သေခံချက်များဖြစ်သည်။ ဒုတိယအဆင့်သည်ဖောင်းပွမှုကိုအမြတ်ထုတ်ရန်လုံလောက်သောအရှိန်ကိုစုဆောင်းနေသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အရှိန်အဟုန်သည်ကြီးမားသောလူ ဦး ရေစာရင်းကိုရောက်ရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ငါးမန်း Tank အကျိုးသက်ရောက်မှုပြိုင်ပွဲဝင်များသည်တီဗွီအစီအစဉ်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းဖြင့်ရောင်းအားနှင့်အခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုများပြားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
PR သို့မဟုတ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဟုလည်းလူသိများသည်၊ သင်၌စာနယ်ဇင်းများရှိသည့်အခါ၌စာနယ်ဇင်းသမားများသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသည်။ 22. ထိပ်တန်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သော Semantic Mastery၊ Mike From Maine နှင့် Carl Radley တို့သည်ဒန်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၏ထုတ်ကုန်များသည် ၀ ယ်လိုအားတိုးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ်တွက်ချက်မှု ၇ ခုထက် ကျော်လွန်၍ ဆွေးနွေးသည်။
ထပ်ခါတလဲလဲဒန်အန်တန်၏ SEO အောင်မြင်မှု၏စစ်မှန်သောကမ္ဘာအပလီကေးရှင်း
အားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတွဲဖက်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်မြှင့်တင်ရန်၏ဇိမ်ခံရှိသည်မဟုတ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကွတ်ကီးများ၊ အံသွားဖြူများသို့မဟုတ်ရှေ့နေများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများအခွင့်အလမ်းများကိုရောင်းချလျှင်သင်အကောင်းဆုံးရည်ညွှန်းအခကြေးငွေရှိသည်၊ သို့မဟုတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်သောကျွန်းပေါ်တွင်သာရှိသည်။ ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများအပေါ် ပိုမို၍ အလေးထားသော်လည်းဒန်သည်အလျင်အမြန်စကေးကိုမည်သို့စီမံနိုင်ခဲ့သည်ကိုအခြေခံသည့်မည်သည့်စီးပွားရေးပုံစံကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူ၏စကားများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုသူတစ်ပါးတို့အားအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးစေရန်နှင့်လွှမ်းမိုးရန်ခွင့်ပြုထားသော၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုက၎င်းတို့အားအများဆုံးဖြစ်သည်။ ခိုင်လုံတဲ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကနေသင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြရမယ်။ Bob ကိုတွေ့ပါ၊ သူ၌အဝါရောင်သွားများနှင့် ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းထွက်မသွားခဲ့ပါ။ ယခုတွင်သူသည်အပြုံးအသစ်နှင့်အတူရှိနေသည်။ သူမအပေါ်သူ၏ဖြူဖြူဖြူဖြူသောလူဖြူများကိုထိုးနှက်ပြီးနောက်သူ၏ဘ ၀ ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအချက်ကလူတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုတွေရရှိအောင်လူတွေကိုလုံလောက်စွာကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ လိမ္မာပါးနပ်သောလူသားများသည်မှားယွင်းသောအချိန်ကာလ၏ ၉၀% ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ယခုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုဆက်စပ်သောဇာတ်လမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ စယ်လီသည်တနင်္လာနေ့တွင်ချာ့ချ်ကြီးများစုဆောင်းပြီးကွတ်ကီးပေါင်း ၅၀၀ လိုအပ်ခဲ့သည်။ မည်သည့်မုန့်ဖုတ်မှသူမကျွန်ုပ်တို့အား“ X” မုန့်ဖုတ်ကိုဆက်သွယ်သည်အထိသူမကူညီလိုသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တရားဝင်ဖောက်သည်ကူညီပေးခဲ့သည်နှင့် သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန် သူတို့သည်သင်၏အများပြည်သူ့လေ့လာမှုကိုလေးစားမှု၊ ယခုတွင်မူ“ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ” ၏တူညီသောပမာဏဖြင့်စီးပွားရေးသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလူ့အဆင့်တွင်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကြယ်ငါးပွင့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်သင်ဂျိုး၏ဆေးဝါးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုကူညီရန်သင်ငွေများရခဲ့သည်။
ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည့်အရာ - ကျွန်ုပ်တို့၏ KnowledgeBase Helpdesk ကိုကြည့်ခြင်းခေတ်လွန်နေသည်
စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ချိတ်ဆက်ရုံဖြင့်တယ်လီဖုန်းအချက်ပေးမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြေဆိုခြင်းသည်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံအားလူမဆန်အောင်ကြိုးပမ်းမှုကိုပြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ပညာတတ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောစားသုံးသူများ၏ယုံကြည်မှုနှင့်စီးပွားရေးကို ၀ င်ရောက်လာသောကုမ္ပဏီများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော hyperpersonal ကိုချဉ်းကပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
၎င်းသည်ဒန်အန်တန်၏ဖောက်သည်တစ် ဦး အားဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အတ္တလန်တာ SEO၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး စီမှကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုရရှိသည်။ ၁ မှ ၁ ။ ၎င်းသည်သီးသန့်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ တစ် ဦး ချင်းအတွက်သာဖန်တီးသည်။ ဤ“ ပါဝင်သည့်အရာများ” သည်ဖန်တီးရန် ၂ နာရီခန့်ကြာပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲ ကြိုတင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အားပြသရန်စိတ်ကူးသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများကိုကြောက်လန့်စေသည်။ “ လျှို့ဝှက်ချက်” ကိုဖော်ထုတ်ပြသပြီးနောက်သင့်ကိုသူတို့မလိုအပ်တော့ပါ။ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဖြစ်မှန်ရုံဆန့်ကျင်ဘက်သက်သေပြခဲ့သည်။ အပြန်အလှန် နိယာမနိယာမကသင်တစ် ဦး ချင်းအဆင့်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းနှင့်ပါဝင်မှုသုံးစွဲမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည်ယေဘူယျဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုအနည်းငယ်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အသုံးပြုသောအချိန်လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှကြည့်ရှုချိန်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်ထက်များစွာကြီးမားသည်ကိုသတိပြုပါ4မိနစ်နှင့် 12 စက္ကန့်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်များမှတစ်ဆင့်လူမှုအထောက်အထားများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ် / ဘတ်ဂျက်အတွက်အကြောင်းပြချက်များပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းပိုမိုမြင့်မားစေပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းပျမ်းမျှမြင်ကွင်းကြာချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြောင်းအရာသုံးစွဲမှုအနည်းဆုံး ၁၅၀% တိုးလာသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အများစုသည်သူတို့၏အလားအလာရှိသောစီးပွားရေးကိုဘာကြောင့် ၀ ယ်ချင်ကြတာလဲဟုသူတို့၏မျက်နှာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသောသူများသည် Atlanta SEO SEO ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်တစ်ရက်လျှင် ၅ ဦး အထိထွက်သွားသောဗီဒီယိုကို ၅၀၀% တက်ခြင်းဖြင့်သက်သေပြသကဲ့သို့ပင်အသွားအလာတူညီသည်။ အပေါ်ယံအဆင့်၌ပင်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်အချည်းနှီးသောကတိတော်များမဟုတ်ဘဲလုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ယုံကြည်မှုနှင့်စီးပွားရေးကိုရရှိရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ကြောက်ရွံ့မှု၊ မသေချာမရေရာမှုသို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုမှုတို့ကြောင့်တူညီသောအသွားအလာကြိုတင်ဗီဒီယို၊ လူသားကြိုတင်ဆက်သွယ်မှုသည်အေဂျင်စီမှမည်သည့်အရေးယူမှုမှမပြုလုပ်ဘဲထွက်ခွာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အကြောင်းအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ Bakery ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အသွားအလာတိုးလာရန်သိကောင်းစရာများမှာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပြုလုပ်ရန်ခေတ်နောက်ကျသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၊ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ)၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်များ (တွဲဖက်များ)၊ စာနယ်ဇင်းများ၊ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခြင်း (တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်း) နှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် (အစားထိုးထားသောမိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ကဲ့သို့သင်၏တန်ဖိုးကိုဖော်ပြခြင်း) ဖြင့်အစားထိုးထားသည်။ Dan Anton သည်လူတစ် ဦး ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီမှကမ္ဘာအနှံ့ရှိထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများစွာကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်ထောင်နှင့်ချီသောဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအထိနှစ်စဉ်ကိန်းဂဏန်း ၇ ခုကျော်ရရှိခဲ့သည်အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ သင်ပြုသည်ကိုသင်ယုံကြည်ပါကအကြောင်းအရာသည်သင့်ကိုသာမန်လူမျိုးကွဲများနှင့်ခွဲခြားရန်သင့်အတွက်ယာဉ်ဖြစ်သည်။
Tags: AffiliatesAmazonAndy greenhawBacklinksIndexerBlackhatWorldတုံမှုနှုန်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်clickbankclient ကိုထောက်ခံစာမင်္ဂလာပါCTRဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများဖောက်သည်သက်သေခံချက်+ googleနေပြည်တော်JVzooMandino ဩဃနာကျင်မှုမှတ်အလားအလာနာကျင်မှုအချက်များမြွေတုံမှုနှုန်းမှုနှုန်းမှတဆင့် serp ကိုကလစ်နှိပ်ပါserp ctrမြွေနေဖို့အချိန်မြွေဇာတ်လမ်းပြောပြအသုံးပြုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုWarriorForum